3 ထွက်ပေါက် အကွိမျမြားစှာ Socket2ယူအက်စ်ဘီ ဆိပ်ကမ်းများ တိုးချဲ့မှု ကြိုး ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ပေးသွင်းသူများ - လက်ကားရောင်းအား စိတ်ကြိုက် မြင့်သည် အရည်အသွေး3ထွက်ပေါက် အကွိမျမြားစှာ Socket2ယူအက်စ်ဘီ ဆိပ်ကမ်းများ တိုးချဲ့မှု ကြိုး - Bohao
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > တိုးချဲ့မှု ကြိုး > IEC 60309 တိုးချဲ့မှု ကြိုး >3ထွက်ပေါက် အကွိမျမြားစှာ Socket2ယူအက်စ်ဘီ ဆိပ်ကမ်းများ တိုးချဲ့မှု ကြိုး
3 ထွက်ပေါက် အကွိမျမြားစှာ Socket2ယူအက်စ်ဘီ ဆိပ်ကမ်းများ တိုးချဲ့မှု ကြိုး
ငါတို့ ထောက်ပံ့ရေး3ထွက်ပေါက် အကွိမျမြားစှာ Socket2ယူအက်စ်ဘီ ဆိပ်ကမ်းများ တိုးချဲ့မှု ကြိုး ၏ မြင့်သည် အရည်အသွေး နှင့် စီအီး ခွင့်ပြုချက်။ ငါတို့ ကျိန်စာ ကိုကို သို့ တိုးချဲ့မှု ကြိုး အများကြီး နှစ်ပေါင်းဖုံးအုပ် အများဆုံး ၏ ဥရောပ နှင့် အမေရိကန် စျေးကွက်။ ငါတို့ ဖြစ်ကြသည် မျှော်လင့်ပါတယ် သို့ ဖြစ်လာသည် မင်းရဲ့ ရေရှည် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွင် Chတွင်a.
၁။ ထုတ်ကုန်3Socket Multiple Socket2USB Port တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း
တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး စိတ်ကြိုက်နှင့် Standard တိုးချဲ့ကြိုးကြိုး၊ တိုးချဲ့ပါဝါကြိုး၊ extension socket၊ အပြင်ဘက်ကြိုးတိုးချဲ့ကြိုး၊ အတွင်းပိုင်း၊ GFCI ဖြင့်တိုးချဲ့ကေဘယ်လ်၊ နိုင်ငံတကာဘေးကင်းလုံခြုံမှုခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထွက်ပေါက်ကြိုး၊ Rohs complian ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များ - မြောက်အမေရိက UL cUL တိုးချဲ့ခြင်းကြိုးများ၊ ဥရောပ VDE / GS / စီအီး၊ ဂျာမနီ၊ အီတလီတိုးချဲ့ကြိုးများ၊
၂။ ထုတ်ကုန် Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်)3Outlet Multiple Socket2USB Ports တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး ၏
ရရှိနိုင်ဂျာမနီ, ပြင်သစ်, ဗြိတိန်,
ဒိန်းမတ်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ သြစတြေးလျ၊
2 တိုင်3ဝါယာကြိုး
ABS / PA6 / ကြေးနီ
H05VV-F 3X1.5mm2, ၃- ၂.၅ မီလီမီတာ
H07RN-F 3X1.5mm2 3'— 2.5mm2
3.Product Feature And Application of the3Outlet Multiple Socket2USB Ports တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး
4. Production Details of the3Outlet Multiple Socket2USB Ports တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး
5.Product Qualification of the3Outlet Multiple Socket2USB Ports တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး
6.Deliver, Shipping And Serving of the3Outlet Multiple Socket2USB Ports တိုးချဲ့ခြင်းကြိုး
hot Tags::3ထွက်ပေါက် အကွိမျမြားစှာ Socket2ယူအက်စ်ဘီ ဆိပ်ကမ်းများ တိုးချဲ့မှု ကြိုး ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, လက္ကား, စိတ်ကြိုက်, မြင့်သည် အရည်အသွေး, အခမဲ့ နမူနာ, တွင် စတော့ရှယ်ယာ, လျှော့စျေး, အနိမ့် စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း
3 ထွက်ပေါက် အကွိမျမြားစှာ Socket တိုးချဲ့မှု ကြိုး3 ထွက်ပေါက် တိုးချဲ့မှု ကြိုးအကွိမျမြားစှာ Socket တိုးချဲ့မှု ကြိုး2 ယူအက်စ်ဘီ ဆိပ်ကမ်းများ တိုးချဲ့မှု ကြိုး